ဘုရားသခင်ကိုရှာ - ဆက်ဆံရေးမှတဆင့်ကိုယ်တော်ကိုကိုးကွယ်
by ကရင် Wolff
ဘုရားသခငျသညျကိုးကှယျဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ကရင် Wolff Christian-Books-For-Women.com ၏ကျွန်တော်ရိုးရှင်းစွာဘုရားသခငျနှငျ့ဆကျဆံရေးမှတဆင့်ကိုးကှယျမှုအကြောင်းအများကြီးသင်ယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသသည်။ "သင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ရဲ့မျက်နှာဒါမှမဟုတ်ညျဘုရားသခငျ၏လက်ရှာကြသနည်း" အတွက် သငျသညျခြီးမှမျးခွငျးမြားနှငျ့ကိုးကှယျခွငျးအားဖွငျ့ဘုရားသခငျ၏နှလုံးကိုဖွင့်ရန်အချိန်အနည်းငယ်သော့ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအစဉျအမွဲသင့်ရဲ့ကလေးတွေထဲကတစ်ခုနှင့်အတူအချိန်သုံးစွဲဖူး, သင်သမျှပဲ "အထဲကဆွဲထား?" ခံခဲ့ရ သငျသညျစိုက်ပျိုးလေးတွေရှိသည်, သငျသညျသူတို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းကိုအများဆုံးသတိရသောအရာကိုသူတို့ကိုမမေးလျှင်, ငါသည်သူတို့အချို့ကိုသင်ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ကာမွန်းလွဲပိုင်းတွင်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာအချိန်မှတ်မိအလောင်းအစားလိမ့်မယ်။
ငါတို့ကလေးတွေကိုအကြှနျုပျတို့မှအများဆုံးချင်သောအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဘို့အမိဘများကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးအနေဖြင့်ကြာပါသည်။ သို့သော် oh, အချိန်ကိုအမြဲတမ်းကျနော်တို့ရေတိုထောက်ပံ့ရေးအတွက်ရှာတွေ့သည့်အရာဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
ငါ၏အသားအကြောင်းကိုလေးနှစ်နှစ်အရွယ်မှာသောအခါငါမှတ်မိသေးတယ်။ သူဒေသခံတစ်ဦးမူကြိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်သူကသာအနည်းငယ်နံနက်တစ်ပါတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့နီးပါးအဆက်မပြတ်ငါသည်ငါ့အချိန်လိုသူသည်ဤလေးမျိုးနှစ်အရွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နေ့တိုင်း။ အားလုံးနေ့ဖြစ်၏။
ငါနေ့လည်ခင်းများတွင်သူနှင့်အတူဘုတ်ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲအနိုင်ရဖြစ်ပျက်အကြင်သူသည် "လောကချန်ပီယံ," ဖြစ်ဆိုကြသည်မယ်လို့သတိရပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, လေးနှစ်အရွယ်အတိအကျငါ၏အကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်အကြောင်းကိုဝါကွှားဖို့တစ်ခုခုမဟုတ်ပါရိုက်နှက်, ဒါပေမယ့်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အစဉ်မပြတ်ငါခေါင်းစဉ်ကျောနဲ့ထွက်လွန်သေချာပါစေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ, တစ်ခါတစ်ရံ။
ကျွန်တော်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်သည့်အခါငါ့သားနဲ့ကျွန်မနှစ်ဦးစလုံးချစ်ဖွယ်အလွန်အထူးအဆအဖြစ်ထိုနေ့ရက်ကာလမှတ်မိသေးတယ်။ ထိုအခါအမှန်တရားဒီလိုခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတည်ဆောက်ပြီးနောက်ငါ့သားမပါဟုတစ်ခက်အချိန်ရှိခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ၏သားပဲသူကငါ့ထံမှရနိုင်သောအရာကိုအဘို့ငါနှင့်အတူအထွက်ဆွဲထားမခံခဲ့ရသိတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တညျဆောကျဆက်ဆံရေးသူငါ့နှလုံးကစဉ်းစားရန်ဆန္ဒရှိထက်ပိုခဲ့, တစ်ခုခုတောင်းခဲ့ဘူးသောအခါဆိုလိုသညျ။
တချို့ကဧရာ Santa Claus အဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရကြ။ ရိုးရှင်းစွာအသင့်ရဲ့ဆန္ဒစာရင်းတင်သွင်းသင်တို့ရှိသမျှကိုကောင်းစွာကြောင်းတွေ့ရှိရန်တဦးတည်းနံနက်နိုးထပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဆက်ဆံရေးဟာအရာခပ်သိမ်းသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပျက်ကွက်။ ဘုရားသခင်ကအရာအားလုံးထက်ထက်ပိုလိုလားတအရာပါပဲ။
ရိုးရှင်းစွာသခင်ဘုရားနှင့်အတူကြောင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆက်ဆံရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသော - - ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ရဲ့မျက်နှာကိုမရှာရမည့်အချိန်ကိုယူသောအခါ, ဖွင့်သူ၏စိတ်နှလုံးကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေဖို့ရှိသည်အားလုံးနားထောငျဖို့ပွင့်လင်းသောကွောငျ့သူသည်မိမိလက်ကိုတိုးချဲ့။
တစ်ဦးကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကျွန်မ Tommey Tenney အသုံးပြုပုံဘုရင်နှင့်အတူကျေးဇူးရှာဖွေခြင်းတို့အတွက်နေ့စဉ် Inspiration ခေါ်ထားတဲ့အံ့သြဖွယ်စာအုပ်ဖတ်ပါ။ ဒါဟာဘုရားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ခရစ်ယာန်ကိုခြီးမှမျးကိုးကွယ်၏အရေးပါမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုအထင်ကြီးဂုဏ်ကျေးဇူးကိုကိုးကွယ်သညျဘုရားသခငျ၏မကျြနှာမဟုတျဘဲမိမိလက်ကိုမှညွှန်ကြားရပါမည်သောစာရေးဆရာရဲ့အခိုင်အမာယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က, ဘုရားသခင်ကိုချစ်ရန်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့, အမှန်တကယ်ညျဘုရားသခငျ၏မျက်မှောက်၌ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင့်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုကိုးကွယ်ပွင့်လင်းလက်နက်နှင့်အတူဘုရားသခင်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလိမ့်မည်။
သို့သော်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝင်ငွေရန်ကြိုးစားရန်, သို့မဟုတ်သင်န်းကျင်သူတွေကိုအထင်ကြီးဖို့, ဒါမှမဟုတ်ပင်တာဝန်အချို့ကိုအသိဖြည့်ဆည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်လှေလွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ လုံးဝ။
ချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုးကွယ်၌ဘုရားသခင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်းနေကြတယ်။ ဘုရားသခငျသညျဘုရားသခငျသညျဟောင်းများကိုရရှိသွားတဲ့ဘယ်တော့မှဘယ်လောက်သင်သူ့ကိုချစ်ပြီးတန်ဖိုးထားအသိပေး။ တကယ်တော့, ချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုးကွယ်သညျဘုရားသခငျ၏နှလုံးကိုဖွင့်လှစ်သောသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျတခုဖွင့်လှစ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ဖြစ်ကြသည်နည်းတူဘုရားသခင့ထံသို့လာကြ၏။ ဘုရားသခငျသညျသမြှကောင်းမကောင်း, သင့်နှလုံးအတွက်င်ကိုတွေ့မြင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘုရားသခငျသညျသငျသညျသူ့ကိုကအားလုံးကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့, သူလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သမျှလုပ်ပေးရန်လုံလောက်သောသငျ့ဆကျဆံရေးနျဖိုးထားကွောငျးကိုသိပေးနိုင်ပါတယ်။
သင်တို့ပတ်လည်အမှုအရာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှာဖွေပါ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်သမျှသောနိမိတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဘို့ဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျးခွငျးမြားနှငျ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကမ်းလှမ်းရန်အဆင်းလှသောနေဝင်ချိန်သို့မဟုတ်သဘာဝတရား၏များစွာသောအခြားအံ့ဘွယ်သောအမှုတစျခုကိုတွေ့မြင်သည်။ ဘုရားသခငျသညျကြေးဇူးတငျစိတျနှလုံးသနျဖိုးထား။
သငျသညျကိုပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်သကဲ့သို့သငျသညျအမှနျတကယျခံစားရပုံကိုဘုရားသခငျသညျဖျောပွဖို့မကြောက်ပါနှင့်။ မိမိတို့လက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်သို့မဟုတ်စဉ်အတွင်းမည်သည့်စိတ်ခံစားမှုဖေါ်ပြခြင်းသက်သာမခံစားရဘူးသောသူတို့အားရှိပါတယ် ကိုးကှယျမှုန်ဆောင်မှု ။ သို့သျောလညျးထိုလူမျိုးသည်အားကစားဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေပွဲ whooping, သြဘာသံများနှင့်တကယ့်အရေးပါလျှင်အဖြစ် hollering မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။ ငါသည်သင်တို့ကိုတက်ခုန်ခြင်းနှင့်နှိမ့်ချသို့မဟုတ်ကြွေးကြော်ဖို့ရှိသည်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရှင်းစွာအပွင့်လင်းလူတို့လက်ဖြင့်ရပ်လျက်သည်သင်၏နှလုံးပွင့်လင်းသည်နှင့်ဘုရားသခငျ့ထံတော်ခံစားရချင်သောဘုရားသခငျကိုပြသထားတယ်။
သူတို့ကိုးကွယ်ကြ၏အဖြစ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့စွမ်းအင်ကိုပြသချင်သောကြောင့်အစီရင်ချကြည့်ရှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးဝေဖန်မနေပါနဲ့။ ကိုးကှယျမှုတစ်ခုစကားရပ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထက်ကွဲပြားခြားနားသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့, ကမသင့်လျော်သို့မဟုတ်မှားယွင်းနေသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီတော့သင့်ရဲ့အာရုံဘုရားသခင်နှင့်အတူသင့်ကိုယ်ပိုင်ကြားဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်ဖြစ်နေဆဲဘုရားသခငျသညျကိုးကှယျအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
ခရစ်ယာန် ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုကိုးကွယ် သငျသညျဘုရားသခငျသညျနှငျ့သငျ့ဆကျဆံရေးတည်ဆောက်ကူညီရန်အာဏာအရှိဆုံးနညျးလမျးတစျခုဖွစျနိုငျပါတယျ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်, ငြိမ်းချမ်းရေး, လူအပေါင်းတို့သင်တို့ပတ်လည်ညျဘုရားသခငျ၏ရှေ့မှောက်တွင်၏လက်ခံမှုခံစားခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှလည်းမရှိ။
သို့သော်ဘုရားသခင်ကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်မိဘတစ်ဦးကဲ့သို့, သတိရပါ။ သူသည်သင်၏ပွင့်လင်းနှလုံးနှင့်သူသည်အဘယ်သူသည်သူ့ကိုမသိရဖို့သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမြင်သောအခါမိမိနှလုံးသင်ရှိသည်အားလုံးပြောနားမထောင်ဖို့ဖွင့်လှစ်။
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအယူအဆ! ဘုရားသခငျ၏တမကျြနှာကိုဦးစှာရှာပြီးတော့သူ့လက်မှကောငျးခြီး feeling ။
ဒါ့အပြင်ကရင် Wolff by:
• သင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းက Share လုပ်နည်း
• ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း Kid ၏ဘုရားသခငျရဲ့လမ်းစဉ်
နဂါး, နတ်ဆိုးများနှင့်ပိုမို: ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း Guardians ရန်လမ်းညွှန်
မိန့်ခွန်းစာဖတ်ခြင်းနားလညျမှုဖော်ပြခဲ့သည် - ငါထဲသို့နေခဲ့ပါတယ်သူကားအဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်ပါလဲ?
မိန့်ခွန်း-ရေးသားခြင်း၏ Kennedy ကစတိုင်ပေါ် Ted Sorensen
ကြောက်မက်ဘွယ်သောအ, Blitzkrieg နှင့်အပြင် - ပိုလန်ကျော်နာဇီငျအုပျခြုပျ
စပိနျအမေရိကန်စစ်ပွဲ: အဆိုပါသင်္ဘော USS မိန်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
သင်သိသည်မဟုတ် 24 ဘောလီဘောအချက်အလက်
အာဏာပိုင်ထံသို့အယူခံ: တစ်ဦးက Logical မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်
Ray Boltz အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Emmeline Pankhurst နေဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သော WSPU
Gonzaga တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
One Minute သို့မဟုတ်လျော့နည်းအတွက်မဆိုအွန်လိုင်းကျောင်းရဲ့အသိအမှတ်ပြုအခြေအနေ Check ရန်ကဘယ်လို
မွန်းလက္ခဏာများနှင့်အတူ Aries Sun က
LDS သမ္မာကျမ်းလေ့လာ Techniques